Apple inoyambira kuti iyo nyowani iPhone 7 Jet Nhema inogona kutambura nemicro-abrasions mukugadzirwa kwayo | IPhone nhau
Apple inoyambira kuti iyo nyowani iPhone 7 Jet Nhema inogona kutambura nemicro-abrasions mukugadzirwa kwayo
D-zuva rakasvika, kana ini zuva, iyo iPhone 7 Yekutangisa Zuva, iyo iPhone yaitarisirwa nevazhinji ... An iPhone iyo inouya kuvandudza huwandu hweserura yevakomana veblock: kamera nyowani (yakanyatso tarisa neApple munguva dzichangopfuura), kuramba mvura (chenjera neavo vanofunga nezve kudhiraivha ne iPhone yako nyowani 7), zvirinani processor, skrini ... Kugadzirwa kusingaperi mukati nekunze: pane mavara matsva aripo!
Asi hongu izvo pane chinhu chimwe chavasina kutiudza muKeynote... Vazhinji venyu muchave nemazino marefu neruvara nyowani rweiyo iPhone 7, iyo nyowani Jet Neruvara. Iyo vhezheni nyowani inopenya nhema, a anodized uye yakabwinyiswa aluminium izvo chaizvo zvinoita kuti iPhone 7 iite senge yepamusoro-kumagumo smartphone. Hongu zvirokwazvo, Apple yatotinyevera kuti iyi nyowani nyowani, kana dhizaini, inogona kuunza micro-abrasions nekushandisa ...
Sezvauri kuona mune yapfuura skrini, tinokuratidza iyo subindex yemharidzo microsite yeiyo iPhone 7 zvimwe zvinyorwa kwavanotinyevera zvinotevera:
Una kunyevera kuti kubva pakuona kwangu hakugamuchirweSei vachida kutinyengedza neruvara rutsva kana vakatinyevera kuti tidzivirire nevhavha ... Sei tichida iyo nyowani iPhone 7 Jet Nhema kana pasina cheiyi nyowani ruvara richaonekwa riine kesi?. Zvakanaka hongu, iwe uchashandisa € 879 yeiyo iPhone 7 Jet Nhema vhezheni kana € 1019 yeiyo iPhone 7 Plus vhezheni muJet Nhema, kuti nditenge kesi inovanza vara iri, uye nekuridzivirira kubva kuma micro-abrasions ... Tichaona zvinoitika kune iyo iPhone yakafumurwa muApple Chitoro mushure mekubatwa nezviuru zvevanhu ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Apple inoyambira kuti iyo nyowani iPhone 7 Jet Nhema inogona kutambura nemicro-abrasions mukugadzirwa kwayo
Frank Soto akadaro
Apple inorara pane iyo iPhone 7 !!!!
Pindura kuna Frank Soto
Pane zvakawanda zvingasarudzwa:
1.- usaise chifukidziro pairi uye utore njodzi: unoda kuti chionekwe
2.- kukutengera kavha yakajeka (kana iyo mhando inongofamba ichitenderedza micheto, kunge bhamba?)
3.- Gumbuka woti hautenge iyo iri muvara nekuti kuifukidza zvirinani utenge imwe.
Ini ndaive nechena iPhone 4s uye yaitaridzika kuva tsvarakadenga pane iyo nhema. Ini ndakazopedzisira ndaichengetedza neye nhema nhema-zvidimbu chifukidziro kubva kune iyo brand "griffin" kana chimwe chakadai ...
Sisi vangu vakandiudza kuti kuisa iyo butiro pairi, zvaive nani kuti uitenge iri nhema. Nharo yake yakaita kwandiri uye inoenderera ichiratidzika kunge isina musoro kwandiri. Ini ndoziva zviri pasi peangu ruoko, uye pandinoiburitsa kunze kwesleeve ndinoifarira. Zvakare, ini ndagara ndichichinja maoko, kunyangwe matanho ane ruoko uye matanho nawo.
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika neruvara rutema. Unogona kusarudza sarudzo yaunoda, asi 3 inoita kunge isina musoro kwandiri, kana ndichida chimwe chinhu munzira uye ndichaenda kuchitenga, ndinochitenga nenzira yandinoda. Nongedzo
Handina kumbobvira ndanzwisisa vanhu vanogunun'una pasina chikonzero. Kana iwe usingade chimwe chinhu, zviri nyore, usatenge icho. Kana chimwe chinhu chiri kudhura uye iwe usina mari yakakwana, usatenge icho.
Ini ndinonzwisisa kuti iyi webhusaiti ine nhau uye isu tese tinogona kutaura, asi imwe nhanho yekusashivirira uye kunyunyuta kwakanyanya muganhu pahupenzi hahaha
Avo vedu vanogona kutenga iyo nyowani iPhone 7, nakidzwa nayo! Nakidzwa! 🙂
Ini handifarire chokwadi chekuti vanoenderera neiyi tsika yekusiyanisa zvakanyanya imwe iPhone modhi kubva kune imwe. Sezvo, nguva dzose yakanakisa, inotakurwa neiyo Plus vhezheni:
Ko zvakadii nezvedu isu tirikuda iyo Plus tekinoroji mune iyo 4,7 ″ modhi?
Tichafanirwa kumirira chishamiso ...
Kana iri yekupedzisa, zvinoita sekunge ndaizotaura zvakanyanya (Jet Nhema). IPhones atove akaomesesa zvakanyanya. Ini handidi kufungidzira kana ndikawira!
Aifanira kuzondiuraya, chaiko.
Iyo AirPods, kwandiri, ini handina kuifarira. Dhizaini yayo inoita senge ine hukasha kwandiri. Tekinoroji yakawandisa mukati asi, kunze, inoita senge yakajairika (EarPods) asi isina tambo ... ndaisazvida zvachose.
Kana iri yeWatch, ihombe, uye neshanduro yeNike Plus. Chinokosha chaicho!
Nekuremekedza kune vamwe vese, ndakafara kushoma ...
VaMac havana kana kutarisa panze.
Iyo vhezheni yeiyo iPad Mhepo sezvavaive vatova? Zvinonyadzisa
IPods, zvishoma nezvishoma, zviri kufa. Zvingave zvakanaka kana ivo vakasiya iyo vhezheni vhezheni chete, seShuffle. Izvi ndizvo zvandinofunga, zvingave zvakanakisa.
Ini zvakare ndinonzwisisa kuti ingadai yakave yakareba kana vaizopa zvese, asi hei.
Juan jesus akadaro
Iwe murume, kana iwe uchida kuti vagadzire iyo ye vibranium iyo isingatswadzi, asi mira, kana Wolverine aine adamantium yake kana nhovo yeCaptain America ikarova, yaizokwenyawo !!! Icho chitsotsi. Ngativei vakakomba, haugone kugadzira chimwe chinhu chisingafe kana kuwana mamaki nekushandisa.
Pindura Juan Jesu
Iwe hauna kunge uine iyo iPhone 5 nhema, hauna iwe? Zvaive zvinonyadzisa ndosaka vakaburitsa nzvimbo grey nema5
Uye nekuti ini ndaive nenzvimbo nhema nhema 5 yemakore maviri ndisina kesi uye negirazi rakadzikama, kana chimwe chinhu choda mari, unochichengeta uye ini ndakachengeta yangu iPhone 5 ndokuitengesa mazana matatu kuti nditenge iyo 300.
Kana iwe ukanyatso chengetedza chinhu hachifanirwe kukweshwa, senge yangu iPhone 6 iri yegoridhe ruvara, angangoita makore maviri asina chifukidziro uye negirazi rakadzikama uye iri pristine !!
Paunotarisira chimwe chinhu chinoratidza ...
Iwe unofunga ivo vakaburitsa nzvimbo grey nemukana?
Iniwo ndinobata zvinhu zvakanaka, asi ndinozvishandisawo.
Nharembozha mudziyo wekushandisa nguva dzose, kuishandisa munzvimbo dzakasiyana kana mamiriro ... .. Haisi porcelain chidhori.
Ini ndinokuvimbisa kuti ndinoziva uye ndaona vanhu vanoitarisira uye vanocheka nekuzviratidza ivo pachavo aluminium Nei iwe uchifunga kuti ivo vari kushambadza izvi nejet nhema?
Uye ini ndinodzokorora zvakare, ndinovashandura gore rega rega uye ivo vanogara vasina banga.
Asi iyo Iphone 5 yaive isina kusimba uye izvo zvekuchaja marara. Kurwa kwakanaka kwandakaita neApple. Tambo chete dzinondisvuura, idzo dzeIphone, Ipad kana Macbook.
Izvo hazvigoneke kuti iwe uve nenzvimbo nhema nhema 5 sezvo iro vara uye kupedzisa hazvina kubuda kusvika 5S… .. chaizvo nekuti kusvika panguva iyo iyo "yakajairika" nhema nhema yaikwenya.
Pane munhu akaitisa ongororo kuti aone huwandu hwepakati pevanhu vanoshandisa nharembozha yavo vasina dziviriro?
Vazhinji vanogunun'una nezve "kushomeka" kweIphone 7 Jet Nhema. Ingori izwi rimwe "Inoshamisa." Apple yakagara ichizivikanwa nezvayo akanaka zvigadzirwa. Vanogona kutaura zvavanoda, kuzvishoropodza, ndinozvigamuchira, asi chokwadi chimwe hachirambiki, Apple yakaramba iri mukuda kweinonyanya kudzvinyirira kwenguva yakareba uye neizvi, nditende, zvicharamba zvakadaro. Ini ndinonakidzwa chaizvo nekushandisa zvigadzirwa zveApple, chiitiko chiri padyo nekuravira dhishi rakanakisa. Kumwe kwekunakidzwa kwangu kuri kutsvaga yakanakira kesi yezvangu zvishandiso. Ruzivo rwekusarudza nekutsvaga iyo inowirirana zvakakwana, uku ichiita kuti iPhone iratidzike kunge yakanaka, yakasarudzika Zviripachena, kune chengetedzo yechiitiko chega chega, kunyangwe hunhu hwemumwe nemumwe mushandisi. Nekudaro isu tinogona kuwana kubva kune yakasarudzika chifukidziro (kana chengetedzo), isina zvakawanda zvakadzama, kuburikidza neanoyevedza matehwe (rudzi rwechikwama), kune vakanyanya avo vane giredhi remauto chitupa kune vashandisi vanofarira zvekunze zviitiko uye vasingade kuzvibvisa kubva yake iPhone (Ndiri mumwe wavo). Ini ndinogona kungotaura kuti ndave kutoda kuti iuye kuMexico kuti ndive nemukana wekuiyemura uye nei isingadaro? Tenga, ndine chokwadi chekuti ichave yakanaka chipo cheKisimusi mota Uye avo vanoiwana, vanoitarisira uye vanakirwe nayo, vanozove nenguva dzakanaka neiyi inonakidza smartphone.
iPhocus - Manual camcorder, yemahara kwenguva shoma
iOS 10: zvese zvaunoda kuti uzive nezve inotevera vhezheni yeIOS